भलिबललाई पहिलो प्रेम मान्छिन् अरुणा « News of Nepal
भलिबललाई पहिलो प्रेम मान्छिन् अरुणा
आमआमाबुबाले जस्तै कमला शाही र कुवेर शाहीले पनि सोचेका थिए, कतै छोरी खेलकुदमा लागेर बिग्रिने त होइन ? चिन्ता स्वाभाविक नै थियो । तर, जतिबेला छोरीले देशका लागि खेलेर अपार ख्याति कमाइन, त्यतिबेला तिनै आमाबुबाले भने– ‘हाम्रो छोरीले त हाम्रो इज्जत पो बढाइन् ।’ यो कथा हो, नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाहीको ।
वर्ष २०७६ मा नेपाली खेलकुदको वृत्तान्त भन्नु नै हाम्रै देशमा भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद हो र त्यसका अनेक अनेक सफलताका कथा छन् । त्यसमध्ये सम्भवतः सबैभन्दा मन छुने कथा हो, महिला राष्ट्रिय भलिबल टिमले चुमेको रजत पदक । भन्नेले भन्दो हो, एकपछि अर्को स्वर्णको हुलमा यो रजत पदक के नै हो र ? तर होइन्, यो रजत पदकको सार नै बेग्लै छ, अनुपम पनि छ ।
भलिबल त नेपालको राष्ट्रिय खेल हो, त्यसमाथि महिला भलिबल बढी नै लोकप्रिय छ । अनि यसका लागि वर्ष २०७६ बेग्लै शानको रह्यो । यही वर्षको उपलब्धिले देखाउँछ, यो खेलमा नेपालको सम्भावना पनि उत्तिकै बाक्लो छ । नेपालले त्यो वर्ष ‘एभिसी सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिप’मा स्वर्ण जितेको थियो । यो महिला भलिबलले पाएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो ।
त्यसपछि त दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रजत पदक पनि हात परिहाल्यो । यो यात्रामा टिमका सबैभन्दा ठूला पात्रा हुन्, तिनै करुणा । उनी कप्तान त हुन नै, गहकिली ‘सेटर’ पनि हुन् । नेपाली महिला भबिललमा आम खेल प्रेमीमा सबैभन्दा चिनिने नाममध्ये सबैभन्दा अगाडि पनि अरुणाकै नाम आउने गर्छ । आखिर यी २७ वर्षीया चेलीले त्यसको आधाभन्दा बढी १४ वर्ष भलिबलका लागि समर्पित गरिसकेकी छिन् ।
यिनै दुई ठूलो सफलतापछि म्याग्दी रघुगंगा गाउँपालिकाका आमाबुबाले आफ्नै छोरीलाई लिएर गर्व नगरेर कहाँ पाइन्थ्यो त ? उनी त अब पूरा गाउँकै शान हुन्, अझ यो भौगोलिक घेरा तोडेर देशकै इज्जतसमेत बनेकी छिन् । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आयोजना गर्ने वर्ष ०७६ को ‘पल्सर स्पोर्टस अवार्ड’को ‘लोकप्रिय खेलाडी’ विधामा अरुणा पनि परेकी छिन्, मनोनयनमा ।
अब यिनलाई समग्र भलिबलमा पु¥याएको योगदानका लागि धेरैभन्दा धेरै मत दिएर जिताउने काम आमखेलप्रेमीको हो । फेरि, एकपल्ट त्यही १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा फर्कौं न, त्यसमा पनि महिला भलिबलको फाइनल । नेपालको प्रतिद्वन्द्वी थियो, भारत । स्वर्णको प्रतिस्पर्धामा नेपालले सुरुआती दुई सेट जितेको थियो, सबैलाई लागेको थियो, अब स्वर्ण नेपालकै हो ।
तर त्यस्तो भएन्, नेपालले त्यसपछि तीन सेट गुमायो । यो तीन सेट गुमाएको मात्र थिएन्, स्वर्ण नै गुमाएको थियो । अरुणालाई मुखमै आएको भात खोस्सिएको जस्तै लागेको थियो । फाइनल खेल के सकिएको थियो, सबै खेलाडीले मन नै थाम्न सकेनन्, कोर्टमै रोए । अरू बेला खासै रूनुनपर्ने अरुणाले पनि आफूलाई रोक्न सकिनन्, अविरल आँसु बगिहाल्यो ।
त्यसो त अरुणा खासै बोलिरहने खालकी होइनन्, तिनलाई हल्का अन्तर्मुखी भन्दा पनि हुन्छ । कप्तान भएयता उनलाई बोल्नुपरेको छ । तर, कम बोल्न सबैले जस्तै उनले पनि सपना भने धेरै देख्छिन्, त्यो पनि दिउँसै । सपनासँगै मनका कुरा खेलाउने बानी भन्दा पनि हुन्छ ।